HARGEYSA: Nin 18 Sanno Shimbiro Quudinayay iyo Culimada oo ka Hadashay – somalilandtoday.com
HARGEYSA: Nin 18 Sanno Shimbiro Quudinayay iyo Culimada oo ka Hadashay
(SLT-Hargeysa)-Cabdiqaadir Cali Ismaaciil oo goob caafimaad ku haysta xaafadda Shacabka ee magaalada Hargeysa, ayaa siddeed iyo toban sanno si joogto ah u quudinayey boqolaal shimbirrood oo u soo qadhaab taga goobtiisa shaqo.
Cabdiqaadir Cali Ismaaciil, oo ah muwaadin reer Somaliland ah, ayaa maalin kasta saddex jeer quud siiya shimbirro aad u tiro badan, kuwaasi oo uu u daadiyo raashinka waddaniga ah ee loo yaqaano Hadhuudhka. Waxaana shimbirrahaasi ay lixdii maalmood ba cunaan jawaan Hadhuudh ah.
Muwaadinkan oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “maalintii aan furay Farmasiga oo laga joogo siddeed iyo toban sanno, illaa xilligan waan quudinayey. maalintii saddex jeer ayaan u daadiyaa Hadhuudh, saddexdaas wakhti oo kala ah arooryada hore, 12-ka duhurnimo iyo saddexda galabnimo.
Shimbirahaasi aan quudiyo, muddadaas siddeed iyo tobanka sanno ahayd, maalina may qadin. Sababta oo ah, carruurtayda iyaga (shimbiraha) ayaa igaga welwel badan.”
Cabdiqaadir Cali ayaa ka hadlay dakhliga dhaqaale ee kaga baxa quudinta shimbirrahan, waxaanu yidhi “Lix maalmood waxa ay cunaan jawaan Hadhuudh ah oo Illaahay iigu soo dhiibo. waxa layga siiya lacag dhan saddex boqol iyo konton kun oo shilin. anigu ma bixiyo ee ILLAHAY ayaa bixiya oo iigu soo dhiiba. Illaahay iguma dhiba igumana culaysiyo, iyaguna kama habsamaan maalin qudhana.”
Cabdiqaadir Cali Ismaaciil “oo u waramayay telefiishanka Goob-joog, ayaa sheegay in ay caruurtiisa sii waddi doonan talaabada wanaagsan ee uu ku quudiyo boqolaalka shimbirood, marka ay ajashiisu dhammaato. “ Meel ay waxa ka cunaan ma hayaan. aniga uun ayay i sugayaan, dadka kale way ka baqayaan oo ku soo hagaagi maayaan. Aniga se’ way i yaqaanaan oo marka ay i arkaa way soo wada yaacan. halkan (Farmasiga) ayey yimaadaan. Caruurtayda ayaan u tababaray in ay quudiyaan, marka ay geeridaydu timaado si ay u sii wadaan hawsha aan bilaabay.”
Dhinaca kale, Diinta Islaamka ayaa ummadda muslimiinta ah ku dhiiri-gelisay in ay quudiyaan oo ay xannaaneeyaan xayawaanadda, sida uu sheegay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo ka mid ah culimada Somaliland, waxaanu si weyn u soo dhaweeyey ficilka wanaagsan ee uu sameeyey Cabdirisaaq, waxaana uu yidhi “nooc walba oo xayawaannada ka mid ah in loo naxariisto weeye oo biyo la siiyo, cunto la siiyo, la xannaaneeyo.
Markaa waxaan leeyahay, ninka Cabdiqaadir Cali Ismaaciil, ee muddada siddeed iyo tobanka sanno ah quudinayay shimbiraha, waxa uu shaqaystay ajar aad u badan. Waxaan leeyahay ILLLAHAY ajar iyo xasanaad ha ka siiyo, ninkaasi meel weyn ayuu wax gaystay, aduunyadana fadligaa wuu ku helayaa, aakhira ajar ayuu ka helayaa.”